Home Wararka Koox hubeysan oo xalay sarkaal ka tirsan CXD ku dilay degmada Wadajir
Koox hubeysan oo xalay sarkaal ka tirsan CXD ku dilay degmada Wadajir
Waxa xalay koox hubeysan ay ku dileen gudaha degmada Wadajir ee Gobolkaan Banaadir Sarkaal ka tirsan Ciidanka kumaandooska Gorgor ee Xoogga dalka Soomaaliya. Dad ayaa waxaa ay ku warrameen in Sarkaalka ay toogasho ku dileen rag ku hubeysnaa Bastoolado, xili uu kusii jeeday hoygiisa oo ku yaalla xaafad ka tirsan Wadajir, isagoona u geeriyooday rasaas ku dhacday.
Warka ayaa intaas ku daraya in sarkaalka la toogtay lagu magacaabi jiray Maxamed Cali Yarami, isla markaana waxaa uu kamid ahaa Ciidanka kumaandooska Gorgor ee Xoogga dalka Soomaaliya ee dalka Turkiga lagu soo tababaray. Raggii ka dambeeyay falka ayaa goobta si deg deg ah uga baxsaday, waxaana sida caadada aheyd halkaas tegay Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska dowladda Federaalka oo qaaday Meydka Marxuum Maxamed Cali.
Ilaa iyi hada ma jirto wax war ah oo kasoo baxay laamaha amniga dowladda Federaalka oo ay uga hadlayaan dilkii xalay gudaha degmada Wadajir Gobolka Banaadir loogu geystay Maxamed Cali Yarami oo ka tirsanaa Ciidanka Gorgor.